ခင်လေးငယ် : “တေလေည” (သို့မဟုတ်) “ကျွန်မ ဘဝ အပိုင်းအစ ~ ၃”
သိန်းငှက်တစ်ကောင်ရဲ့ အမြန်နှုန်းမျိုးနဲ့ ည- ဟာ တဟုန်ထိုး ဝဲပျံနေရဲ့ ~
ဆာလောင်နေတဲ့ ညဟာ စူးရှရှ အလင်းတန်းတွေကို ခေါင်းခါ.. သူ့ပါးစပ်ကို အကျယ်ဆုံး ဟ- လို့ ကြယ်ပွင့်တွေကို ဟတ်- နေတယ်..။ တစ်ခါတုန်းက ချစ်စရာ တေလေည တွေဆီ ပျံသန်းကြည့်ဖို့ ည- ကို တောင်ပံ တပ်ပေး လိုက်မိသူဟာ ကျွန်မ ကိုယ်တိုင်ပဲလား..!!
ဇဝေဇဝါ နဲ့ သိပ်တော့ မရေရာလှ ~ ။
အစိမ်းနုရောင် ပါးပါးလေး လိမ်းသုတ်ထားပြီး မြေပြင်မှာ ပြားပြားဝပ် ကပ်နေတဲ့ “စိမ်းလဲ့လဲ့” လို့ နံမည် ချိတ်ထားတဲ့ တိုက်ပုလေး တစ်လုံး...။ အဲ့ဒီ အိမ်လေး ဧည့်ခန်း အထွက်မှာ ရှိနေတဲ့ သံဇကာကွက်နဲ့ ဝရံတာလေးမှာ ဖေဖေ ဂစ်တာတီးနေတယ်..။
မေမေကတော့ ညနေ ထမင်းဝိုင်းအတွက် ဟင်းပွဲတွေ ပြင်လို့.. အပျိုပေါက်အရွယ် ရှစ်တန်းကျောင်းသူ ကောင်မလေး တစ်ယောက် မှန်ကြည့်ပြီး သနပ်ခါးတွေ လိမ်း..! လေးတန်း ကျောင်းသူ ညီမငယ်လေးက သူ့ ကုတင်ပေါ်မှာ ထိုင်ပြီး စက္ကူလှေလေးတွေ ခေါက်နေရဲ့..။
“တစ်ခု.. နှစ်ခု.. သုံး- လေး ခု” ။
နီညိုရောင် တိမ်တိုက်တွေက ရှက်ရွံ့နေတဲ့ ညနေခင်းကို ငြင်ငြင်သာသာလေး ပွေ့ချီ ယူဆောင်လာခဲ့ ချိန်လေးပေါ့ ~ မကြာခင်မှာပဲ ညနေခင်းလေးဟာ အမှောင်ထုထဲ တိုးဝင် ကွယ်ပျောက်ရော့မယ်..။
အိပ်တန်းတက်ရ ခါနီးမှာ သန်းဝေနေတဲ့ ငှက်တချို့က လေးတိလေးပင်နဲ့ ဝတ်ကျေတန်းကျေ တောင်ပံ ခတ်ကြ...။
“အားစိုက်လိုက်ပါကွာ နားခိုရာဆီ ရောက်လုပြီ”
ငှက်လေးတွေရဲ့ သန်းဝေသံဟာ ဖေဖေ့ ဂစ်တာသံ တိုးညက်ညက်လေး အောက်မှာ ပျောက်သွားပြန်ကော..! ဖေဖေ့ ဆီက သီချင်းသံလေး လွင့်လာတယ်.. ညနေတိုင်း မေမေ့ကို ဆိုပြနေကျ The Everly Brothers ရဲ့ သီချင်းလေး..
“Darling you can count on me
Devoted to you”
မေမေ ဖေဖေ့ အနားရောက်လာတယ်..။ မေမေ ပြုံးနေတယ်..။ ပျော့အိအိ ဖြူလွင့်လွင့် ဘလောက်ဇ် အင်္ကျီလေး ဝတ်ထားတယ်..။ မေမေ့ ပါးလေးတွေမှာ ချွေးစလေး အချို့..။ အို ~~ သိပ်လှတာပဲ..။
“ဒယ်ဒီ နောက်မှ Devoted to you မယ် ထ- တော့ မေမေ ထမင်းပွဲ အဆင်သင့် ဖြစ်ပါပြီ”
လေပွေတစ်စက ခြံထိပ်ဝ သကြားပင်ကြီးပေါ်က ရွက်ခြောက်တွေကို တဖွဖွ ခြွေပြ...။
ဖေဖေကလည်း ချွေးလေးတွေ စို့နေတဲ့ မေမေ့ နဖူးလေးထက်ကို အနမ်း တစ်စ ခြွေချ..။
ကျွန်မရဲ့ ညဟာ ဝိုင်းဝိုင်းစက်နေတဲ့ လမင်းကြီးကို ကွေ့ကာ ဝိုက်ရင်း အရှိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ ဆက်ပျံနေတယ်..။
အိမ်ကလေးရှေ့မှာ မေမေပျိုးထားတဲ့ ပန်းခင်းပျိုလေး က ငြိမ်သက်လို့ ~ အဝါရောင် ဝတ်ဆံလေးတွေနဲ့ ပန်းအဖြူလေးတွေက ည- ကို မောမော့ကြည့်ပြီး မျက်စောင်းထိုးတော့ လေပြေက ဝါးလုံးကွဲ ရယ်မောတယ်..။
ရှစ်တန်းကျောင်းသူ ကောင်မလေး တစ်ယောက် သန်းခေါင်ကျော် လုလုမှာ သချာင်္ တွက်ချင်ယောင် ဆောင်နေခဲ့သလား..!! ဒါလည်း သိပ်ပြီး မသေချာလှ..။
လေးတန်းကျောင်းသူ ညီမလေး.. ခပ်လှမ်းလှမ်းက သူပိုင်ဆိုင်ရာ ကုတင်ပေါ်မှာ အိပ်နေတာတော့ အသေအချာ..။ ပန်းရင့်ရောင် ပန်းပွင့် အကြီးကြီးတွေနဲ့ မေမေ ချုပ်ပေးထားတဲ့ ဖက်ခေါင်းအုံးလေးကို ခွထားတာလည်း အတိအကျ..။
ကျွန်မ ကုတင်ပေါ်ကို လှမ်းကြည့်စရာ မလိုပဲ သိတယ်..။ ခေါင်းအုံးအောက်မှာ မေမေ မသိအောင် ထိုးဝှက်ထားတဲ့ ဝတ္တု နှစ်အုပ် ရှိနေမယ်..။ ခြေရင်းက ခြုံစောင်လေး အောက်မှာလည်း ကဗျာစာအုပ်လေးတွေ ရှိသေးရဲ့..။
“တစ်အုပ်.. နှစ်အုပ်” ။
ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးမိလိုက်လေသလား မသေချာ မရေရာတဲ့ ည- ကို ကျွန်မ တစ်ယောက်တည်း အပိုင်သိမ်း..။ ဘာချုပ်နှောင်မှုမျိုးနဲ့ မှ နှောင်ဖွဲ့မထားဖြစ်တော့..။ တောင်ပံတစ်စုံ ရ ထားတဲ့ ည- ဟာ အိန်ဂျယ်လ် တစ်ပါးပဲ..။ လွတ်လပ်ခြင်းကို အပြည့်အဝ စားသုံးနေတယ်..။
ဝင်သက် ထွက်သက်မှာ ငြိတွယ်မှု မရှိနိုင်အောင် စိတ်လိုလက်ရ သူ ပျော်နေတယ် ~
ကျွန်မကို အုပ်မိုးပြီး ပြုံးကြည့်နေတဲ့ ည- ရဲ့ အပြုံးတွေက သိပ်ခမ်းနားတာပဲ..။ ကျွန်မ ခန္ဓာ တစ်ကိုယ်လုံးလည်း သူ့ လိုပဲ ပေါ့ပါးသထက် ပေါ့ပါး လာပေါ့..။ မျက်လုံးတွေကို ဖိပြီး မှိတ်ချလိုက်ချိန်မှာ ~ ~ ~
ကျွန်မ ကိုယ်တိုင်က လွတ်မြောက်ခြင်းတွေနဲ့ ဝဲပျံနေတဲ့ ည- ဖြစ်နေပေါ့..။
အသက်ကို အပြင်းဆုံး တစ်ချက် ရှိုက်သွင်းပြီး တေလေ ည- တစ်စင်း အဖြစ်... ကျွန်မ ကိုယ်ယောင် ဖျောက်ချ လိုက်မိတော့တယ်..။
ကျွန်မ ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ဘဝ အပိုင်းစလေးတွေ ရဲ့ Link ပါ..။
ကျွန်မဘဝ အပိုင်းအစလေးများ (၁)
ကျွန်မဘဝ အပိုင်းအစလေးများ (၂)
Posted by Khin Lay Ngel at 8/03/2012 08:15:00 PM